Rubatsiro Services - Bilingual Dzidzo Institute
musha Chirungu kune Vapoteri, maAsylees, SIV, uye Vakakuvadzwa MukutengeswaTsigira Services
Semunhu mutsva kuUnited States, kudzidza Chirungu kunogona kubatsira kukubatanidza kumba kwako idzva uye nharaunda yako itsva. Chinangwa chedu paBEI ndechekukubatsira iwe kuzadzisa Chiroto chako cheAmerica uye kukunda chero zvipinganidzo nekukupa iwe chimwe chezvishandiso zvine simba - kutaurirana. Isu tinokudzidzisa iwe Chirungu chaunoda munharaunda nebasa. Kana zano rekutora kirasi yeChirungu risingaite sezvazviri, funga masevhisi ekutsigira atinopa kuti ubatsire iwe kuzadzisa zvinangwa zvako.
Kuwana basa kunogona kunetsa, kunyanya kana iwe uri mutsva kuAmerica. Wedu Mudzidzi Advisor ari pano kuti akubatsire uye akubatsire iwe kupedzisa matanho ekuzadzisa yako nzira yebasa. Dzimwe nguva izvi zvinoreva kuenderera mberi nehupenyu hwako hwekuita basa pano muUS. Dzimwe nguva, zvinoreva kutsvaga chinangwa chebasa rebasa. Basa Redu rekupa zano rekubatsira rinogona kubatsira kuona mikana yekudzidzira, kutangazve kunyora, makirasi emutauro weChirungu, makirasi ekugona basa, nezvimwe!
Kubatsira Kuita Basa:
Dudziro / Kududzira
BEI inopa kuchengetedza kwevana panguva yekirasi, kuitira kuti Amai nababa vaenderere mberi nekudzidza Chirungu apo vana vanochengetwa.
BEI ndingave ndinopa wako mutauro, asi waizviziva here kuti tinogona kukubatsira iwe kutsvaga zvimwe zviwanikwa munharaunda? Semudzidzi paBEI, iwe uri chikamu chenetwork yakakura yekutsigira. Usazeze kutibvunza chero mibvunzo. Tinogona kuenda kwauri kune vamwe Refugee Service vanopa rubatsiro rwemabasa, zvinodiwa pekugara, gED kugadzirira, etc. Isu tavandudza makore enharaunda yenharaunda, zvakare. Ive neshuwa kusangana neBEI's Mudzidzi Advisor kuti udzidze zvakawanda.
Tese tiri vadzidzi vemitauro uye isu tinoziva zvazvinoita sekutanga mudzidzi. Mune nguva pazvinenge zvichidikanwa, vashandi vedu vakasiyana siyana pamwe nehunyanzvi vanogona kukubatsira nemutauro wako. Tine rutsigiro rwemitauro muchiArabhu, Chinese, Farsi, French, Hindi, Germany, Gujarati, Japan, Kazakh, Kinyarwanda, Kirundi, Kikorea, Kurdish, Chiputukezi, Chipari, Chiromania, Russian, Serbo-Croatia, Chitumba, Spanish, Swahili, Tagalog. , Turkish, Urdu, Vietnamese, uye Yoruba.
Paunotamira kuguta idzva, dzimwe nguva zvinotora nguva kuti udzidze migwagwa uye kugarisana zvakanaka. Nekuda kweizvi, tinopa mazhinji emakirasi edu padyo nepamba pako, munzvimbo iyo iri nyore kufamba kuenda. Kana iwe wakasununguka nezvifambiso zvevoruzhinji, iwe unogona kukwanisa kutora kirasi pane yedu kosi. Mabhokisi tokens anowanikwa kuti vadzidzi vauye kuBEI, sezvazvinodiwa.
Kunyorera kweUUS Citizen?
BEI inobatsira kureva vatengi vanokodzera yemahara US Citizenship prep makosi kuburikidza neCCT Houston.
Makirasi ndeevadzidzi vechirungu uye anotarisisa kugadzirira vadzidzi kubvunzurudza Naturalization, Chirungu uye US Civics / Nhoroondo bvunzo. Dzidzira kubvunzurudza, bvunzo, uye dzidza Chirungu chinodikanwa kuti ubudirire. Vanobudirira vanobatanidzira vanowanikwazve mukana wekubatsirwa pamutemo uye mumiriri wehurongwa hwavo hwekugadziriswa kubva kuCatholic Charities.
Kumbira rumwe ruzivo nezve Citizenship Prep Course
Ndokumbirawo unyore 2 kuitira kuti tizive kuti uri munhu chaiye
Iyo munda weChirungu Mutauro Kudzidza ichokwadi munda wepasi rose nemikana yekushanda nemarudzi akasiyana siyana pamba kana kufamba rwendo rwepasi rese uchidzidzisa nekusangana nevanhu vatsva. Kunyangwe iwe uchifarira kudzidzisa kumba kana kushanya kune imwe nyika, BEI inogona kukubatsira nekudzidziswa kunodiwa kuti uve nyanzvi yeChirungu Mutauro weChirungu.
Yedu Vazvipiri Yevadzidzi Yekudzidzisa Chirongwa chakagadzirirwa kubatsira vanovhota kuti vabudirire Chirungu Chirume vadzidzisi nekupa:
Basic matipi uye matekiniki anoshanda Chirungu Mutauro Kurayiridza.
Kudzidzisa nzira dzekuitisa vadzidzi veese mazera uye mazinga.
Kutungamirwa kwekirasi uye kuronga kwezvidzidzo zvezvikamu zvakasiyana.
Maitiro ekupedzisira muEEL Trends, Kubatanidzwa kwekudzidza, uye nzira dzekutaurirana.
Chiitiko chinoshanda chevadzidzisi vatsva veEEL vanofarira kudzidzisa kumba nekune dzimwe nyika.
Saka kana iwe uri kufunga nezve basa muChirungu Mutauro dzidzo, unoda kuzopedzisa rako rekuita, kana kungoda kufamba uye kushanda nepasirose, bata BEI kutanga rako EL basa.